Rugby U20 – «Trophée Barthès 2018» : nomontsanin’i Zimbaboe 100 no ho 15 ny Makis | NewsMada
Rugby U20 – «Trophée Barthès 2018» : nomontsanin’i Zimbaboe 100 no ho 15 ny Makis
Nifarana, ny asabotsy lasa teo, tao amin’ny kianja Hage Geingob Stadium, Namibia ny fiadiana ny «Trophée Barthès 2018», taranja rugby ho an’ny sokajy zandriny U20. Fihaonana natokana ho an’ireo firenena aty amin’ny tapany atsimon’i Afrika. Nomontsanin’i Zimbaboe, tamin’ny isa mavesatra, 100 no ho 15 ny Makis de Madagascar, teo amin’ny fiadiana ny toerana fahatelo.
Vokatra izay tsy nampino ary toa nampanonofy antoandro ny mpanara-baovao satria tsy mbola niaina vokatra toa izao, ny Makis «Junior», hatramin’izay niatrehany fifaninanana. Teo am-pialan-tsasatra anefa mbola teritery ihany ny isa teny amin’ny solaitraibe, na mbola ry zareo Zimbaboe aza no nitarika, 22 no ho 12.
Nanjakan-dry zareo Zimbaboeanina amin’izay ny tapa-potoana faharoa satria dia nisesy ny baolina nentin-tanana. Notaomina tamin’ny sobika araka ny fitenenana, ny baolina matin-dry zareo Zimbaboe. Tetsy ankilany, tsy nahafaty afa-tsy «Hors-jeu», iray monja ny Malagasy. Andrasana, ny tatitra hataon’ny mpanazatra, ny antony nahatonga izao faharesena mioam-pampana be toa izao.
Tompondakan’ny faritra atsimo ry zareo Namibianina, rehefa nanilika an’i Kenya, tamin’ny isa, 37 no ho 18. Hiatrika ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany izany i Namibia, ary hanao ny «circuit mondial».
Mila mpilalao lehibe
Samy nahamarika avokoa ireo mpijery baolina tany Namibia, fa mahay baolina ny malagasy saingy voa eo amin’ny haben’ny vatana. Fotoana izao, tokony hitodihan’ny tomponandraikitra eo anivon’ny Malagasy rugby sy ny teknisianina malagasy, mba hitiliana sy hijerena ireo zanaka malagasy lehibe sy manam-batana, any Frantsa na any amin’ireo firenena hafa, hanatevina ny ekipam-pirenena malagasy. Raha mbola hionona, amin’ny haben’ny vatan’ny mpilalao zandriny eto an-toerana fotsiny, dia ho toy izao foana ny vokatra ary tsy ho afaka ny handingana an’i Afrika mihitsy. Efa hain’ireo Afrikanina, mantsy ny milalao amin’ny Malagasy, amin’io vatana tsy mitovy io.
Ny an’ireo firenena nifanandrina tamin’ny Makis, tamin’ity fihaonana ity, misy vazaha nomena zom-pirenena mihitsy, hiaro ny voninahi-pireneny.
Any amin’ny fitondram-panjakana ihany koa izany ny baolina, amin’ny mety hahazoana manatanteraka izany.